Manje njengoba usuvele uhlanganyele, ukubalwa kwe-Day Big kuqale ngokusemthethweni. Futhi nakuba kungase kubonakale kusengaphambili, kodwa empeleni, manje yisikhathi esifanele sokuqala ukucabanga ngokuthi uzobukeka kanjani emshadweni. Yebo, kungathatha isikhashana, kodwa umphumela ubalulekile, kwesokudla? Nazi izinto eziyishumi okufanele uqale ukuzenza okwamanje ukuze ubheke futhi uzizwe kahle uma sekuyisikhathi sokuthi "Ngiyavuma."
Khulisa izinwele zakho
Uma uhlela ukwenza umkhonto omuhle kakhulu womshado, kubalulekile ukuqala ukukhula izinwele zakho nokuzinakekela ngokushesha ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzokusiza zonke izinhlobo zamaski, ikakhulukazi lezo ezifaka amafutha e-burdock (ahamba ngesivinini sezinwele).
Kukhona abaningi bashaya abasebenza kahle ekhaya. Ungaphinda ucele usizo oluvela kuchwepheshe. Kodwa konke lokhu kuthatha isikhathi. Zisize ezinyangeni ezimbili ukufeza ukumamatheka okuhle, ngakho-ke ngesikhathi somkhosi nesithombe sokudubula ungazizwa unamahloni.
Uma uzosebenzisa i-autosunburn, kufanele uzame izinketho ezimbalwa ngaphambi komkhosi womshado. Ezinye zazo zingase zibukeke njenge-orange, ezinye - zingabonakali ngokwanele. Inqubo yokugcina iqoke izinsuku ezimbalwa ngaphambi komshado, ukuba nesibonakaliso se-chic futhi ukuze igqoke lakho elimhlophe lingashiyi izindawo ezibomvu.
Hlanza umzimba wakho
Uma kunokwenzeka, gwema ushukela, ukudla okunomusa futhi okubukhali. Zama ukungadli okuthosiwe. Izinto eziyingozi eziqukethwe imikhiqizo enjalo zifakwa emzimbeni wakho. Uma uzama ukugcina ukudla okufanayo izinyanga ezimbalwa, qiniseka ukuthi isikhumba sakho nezinwele ziba ngcono, futhi ukuvuka ekuseni kuzoba lula.
Yenza umzimba ekuzivocavoca
Uma ufika esibukweni futhi uzizwa unganeliseki, ke ulungise! Yenza ku-gym ukuze ufeze umphumela ongakufanisa nawe. Uma unembatho yomshado evulekile (isibonelo, ungenasici), gxila kulezo zincenye zomzimba ezizobonakala. Isibonelo, izandla.
Qaphela ukuma kwamashiya
Lesi esinye isenzo esenza kahle kakhulu kusengaphambili. Vakashela ochwepheshe bese uxoxisana nefomu ukuthi, ngokombono wakho, uhambelana kahle nesimo sobuso bakho. Ngemuva kwezinyanga eziningana zomsebenzi nabo, uzobe ulungise kahle amashiya amahle ukuze udale ukulungiswa komshado okuphelele.
Ngaphezu kokuqeda usawoti, ushukela kanye nezinto eziyingozi emzimbeni, amanzi iyimfihlakalo yobuhle kanye ne-vivacity. Ukuphuza amanzi amaningi, uzogeza izidakamizwa ezingadingekile emzimbeni, ugcwalise isikhumba ngokukhanya okunempilo. Ngaphezu kwalokho, uzozizwa uphilile, uvumelana, futhi uzoyeka ukudonsa ukudla okulimazayo.
Zama izandiso ze-eyelashi
Esikhundleni sokunamathela ama-eyelashes amafomu ngosuku lwakho lomshado futhi uhlale ukhathazeka uma ungawa, cabanga ngokuthola i-eyelashes ephelele ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi komshado. Uchwepheshe uzokwazi ukungeza emgqeni wokukhula kwe-eyelash, futhi uzoba nesikhathi sokuzama ubude nobukhulu.
Zama ngezinwele kanye ne-makeup
Ngaphambi kokufaka izithombe, qiniseka ukuthi unekhanda elihle kanye ne-makeup. Ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi komshado, khetha umculi wezinwele nomculi wokwenza uphinde uzame izithombe ezimbalwa. Qiniseka ukuthi uzizwa uqiniseka futhi ukhululekile.
Uma ufuna ukuthuthukisa noma ukushintsha kakhulu ukubukeka ngaphambi komshado, setha umgomo bese uya kuwo. Izinguquko zidinga isikhathi (ikakhulukazi uma uphupha ngomshado ofanelekayo). Hlela yonke imisebenzi kusengaphambili futhi unamathele emigomweni ebekiwe, khona-ke umshado wakho uzoba umcimbi omnandi, omnandi futhi ongathandeki kuwe!
Ukukhetha imishudo amasondo ingxubevange
Inkukhu, ngosile kuhhavini: ezimbalwa ongakhetha entsha ukupheka
Kanjani ukuba ulahleke ezweni lanamuhla kolwazi: amafomu ngokuqhubekayo futhi okuqhubekayo kolwazi
Disc for the waist: izinzuzo zokuzivocavoca on simulator enjalo
Indlela ukushintsha zangemuva PowerPoint? Ukulingisa, imidwebo kanye amamaki wamanzi
Indlela yokugcoba umcamelo ngezandla zakho.